E-Village, I-SPA, Indawo engcono kakhulu, Indawo Yomlilo, umbhede owodwa - I-Airbnb
E-Village, I-SPA, Indawo engcono kakhulu, Indawo Yomlilo, umbhede owodwa
Inani elinebhedi/UBHAVU owodwa, ungafaka UMBHEDE/UBHAVU wesibili ngemali. Ngisebenzisa le ndlu ukugcwalisa izikhala-iviki eliphakathi nalapho indlu enkulu ingaqashiwe futhi SICELA ungaceli IZIMPELASONTO eziphakeme/IHOLIDE emavikini angaphezu kwamabili kusengaphambili. Izinyathelo ezikude nezitolo zekhofi ezihamba phambili zemizana, amabhikawozi, u-ayisikhilimu, izindawo zokudlela, izindawo zesidlo sasekuseni, izindawo zokuthenga, indawo yedolobhana, isiteshi sesitimela esihle, ukushushuluza eqhweni, isikhungo sokuphumula, i-North Conway Country Club, nokuningi. Kungakapheli amamayela ambalwa ukuya e-Cranmore MT ngemisebenzi yazo zonke izinkathi zonyaka.
SICELA ungaceli IZIMPELASONTO, IZIKHATHI EZIMATASA, AMAHOLIDE, njengoba kuzodingeka singamukeli futhi sikhethe ukubhukha indlu enkulu yale ndlu. Indlu yonke yindlu enamakamelo okulala angu-6 esiwaqashisela amaqembu amakhulu, lapho ingenamuntu, phakathi neviki, ngizonikeza ikamelo elilodwa ukuze ngigcwalise izikhala futhi inani elokuhlanza nokusebenzisa amalineni ekamelo elilodwa NEZIVAKASHI ezingu-2. Azikho ezinye izivakashi ezizobe zisendlini. Uma ungathanda ukusebenzisa ikamelo lokulala/igumbi lokugezela elengeziwe, noma ukuba nesivakashi esengeziwe, singakwazi ukulungisa inani ukuze sibonise izindleko ezengeziwe zokuhlanza, ukuhlinzeka ngamashidi, njll.
Azikho IZIVAKASHI EZENGEZIWE < IMICIMBI < IZILWANE EZIFUYWAYO ngaphandle kwemvume yangaphambilini
Indlu inekhamera yokuqapha engaphandle futhi ngithemba ukuthi uzovumela kuphela izivakashi ezibhalisiwe kanye namakamelo agciniwe. Inkosi ngayinye inobhavu wayo we-Master, futhi uma usebenzisa ikamelo le-bunk, inobhavu wayo futhi.
Wonke amashidi ahlanzekile athokomele, imibhede, ifenisha. Igceke elikhulu, ubhavu wamanzi ashisayo, indawo yokupaka, ubhasikidi webhola endaweni yokungena imoto, iveranda engemuva, i-patio yangaphambili, ngokuqondile edolobhaneni. Ukubukwa kwe-Cranmore ukusuka endlini.
Indlu yonke izoba ngeyakho wedwa, kodwa idinga ukuthi usebenzise kuphela amakamelo aqashiwe, ngezindleko zokuhlanza.
4.83 · 148 okushiwo abanye
Ngokuqondile e-Village, umnyango oseduze nezindawo zokudlela, izitolo, njll.